तीन वर्षदेखि ८४ करोडकाे पर्खाइमा पूर्वलडाकु ! - Everest Dainik - News from Nepal
तीन वर्षदेखि ८४ करोडकाे पर्खाइमा पूर्वलडाकु !
काठमाडौं, भदौ १८ । सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ झन्डै ३ बर्षदेखि नहुँदा बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाले ८४ करोड रुपैयाँ पाउन सकेका छैनन् । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७३÷०७४ मा बहिर्गमित रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित ३० जनाले सो निर्णयविरुद्ध २०७३ साउनमा सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । सो रिट ३१ पटक सरे पनि अझै सुनुवाई हुन नसकेको बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका उपाध्यक्ष योग्यबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
याे पनि पढ्नुस पूर्वलडाकू यमबहादुर सेनाको सहायक रथी बन्ने निश्चित
उनले भने, ‘आरणसहित ३० जनाले मन्त्रिपरिषदलार्य विपक्षी बनाएर रिट दायर गराएको कारण निवेदनमाथि कुनै निर्णय हनु नसक्दा हामी बहिर्गमित जनमुक्ति सेना घर न घाटको भएका छौ ।’
संगठनको तथ्यांकअनुसार देशभर ४ हजार ९ जनाले बहिर्गमित जनमुक्ति सेना छन् । जसमध्ये २ हजार २ सय महिला लडाकु रहेका छन् । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ
ट्याग्स: Ladaku, purba ladaku, पूर्वलडाकु